Soomaalida Iswiidhan ee diinta masiixiyadda heeysta oo cabasho afka furtay – Balcad.com Teyteyleey
Ma ahan arrin sahlan in adigoo soomaali ah aad tiraahdo masiixi baan ahay iyadoo soomaalida badankeeda lugu og yahay ineey yihiin ummad islaam ah. Saas oo ay tahayna waxaa jira soomaali waligoodba lugu sheegi jiray ineey yihiin masiixiyiin oo qaarkood maruuf ku ahaa dhinaacs.
Burburkii dowlanimadda Soomaaliya ka dibna waxaa aad u soo batay soomaali dhinacaas u xuub siibtay sideey doonaan ha ku galaane. Haddaba soomaalida ku nool dalkaan Iswiidhan oo heeysta diinta masiixiga ayaa afka furtay ka dib markii ay sheegeen in iyagoo ku nool dalka Iswiidhan loogu hanjabo dil.
Wargeyska lugu magacaabo Dagen oo ah mid kooxaha masiixiyiinta ahi taabacsan ayaa qoray qoraal uu amuurtaas kaga hadlayo. Wargeyska ayaa qoray in soomaalida masiixiyiinta ah ay maalin walba kala kulmaan hanjabaado dil ah soomaalida kale ee ku nool dalka.
Shaqsiyaadka lugu magacabao Muna Walter, Shiine iyo Shania Gaabow oo ah soomali heeysata diinta masiixiga ayaa wargeyskaas u sheegay soo gaaraan farrimo fariimo dil ah. Halka qaarkood fariimahan hanjabaada ah loo mar siiyey baraha bulshadda. Muna Walter oo ka mid ah shaqsiyaadka diinta ka baxay ayaa caan ku ah aflagaadeeynta iyo ka been sheegista diinta Islaamka iyadoo baraha bulshaddana ay si weyn u adeegsato.
The post Soomaalida Iswiidhan ee diinta masiixiyadda heeysta oo cabasho afka furtay appeared first on Ilwareed Online.